​मेची पुल तारेर जब मोड्न खोजियो मन
Saturday, 25 May, 2019 10:22 AM
‘हामी सदावहार नोकर बन्यौं । कहिल्यै बोस बन्न सकेनौं । सधैँ नोकर भएर म¥यौं ।’ एकबारको जिन्दगीमा कसलाई बोस बन्ने रहर नजाग्ला र ! बोस भएर बाँच्न पाइने भए किन पछि हट्ने ? जोसुकैले जुनसुकै मूल्य चुकाउन सक्छन् । सर्वसाधारणको करोडौं ठगी गर्ने व्यवसायीलाई राज्यले प्रतिबन्ध लगाए पनि जरैदेखि निमोठ्न नसक्दा र त्यसको विकल्प नल्याउँदा यो व्यवसाय फस्टाउँदो छ । एक नम्बर प्रदेश झापामा नेटवर्किङ व्यवसाय यसरी फस्टाउँदो छ कि सगोल परिवार आबद्ध रहेर करोडौँ कमाएका छन् ।
ओरियन्स नामक भारतीय कम्पनीको सदस्य बनेर आयुर्वेदिक औषधिको नेटवर्किङ गरी हप्तामा लाख कमाउन सकिने भएपछि व्यवसाय छोडी पूर्णकालीन रुपमा होमिएका छन् । केही दिनअघि राजधानीको याक एण्ड यति होटलबाट १२ जना नेटवर्किङ व्यवसायी पक्राउ पर्दा सिलिगुडीको एक होटलमा ओरियन्सको तीनदिने सेमिनार चल्दै थियो नेपाली नेटवर्किङकर्ताहरूका लागि मात्र । जसमा भाग लिन झण्डै चार दर्जन नेपाली पुगेका थिए । काठमाडौंबाट एक जना विद्यार्थीलाई पनि झुक्याएर पु¥याइएको थियो । काँकडभिट्टामा मोटिभेसनल कार्यक्रम हुने र तीन दिनमा जीवन परिवर्तन हुने पूर्ण आश्वासनसँगै उनी त्यसतर्फ जान आतुर भएका हुन् ।
यो कथामा तिनै विद्यार्थीले देखेका, भोगेका दृश्य सविस्तार वर्णन गरिएको छ । काँकडभिट्टादेखि करिब ३१ किलोमिटरको दूरी छिचोलेपछि पुगिन्छ, सेमिनार स्थलमा । प्रशिक्षक सबै झापाका (प्रायः शिक्षक) । तालिम लिनेहरू पनि प्रायः त्यताकै । एसईई दिएका, स्नातकोत्तर पढेका र अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारी पनि हुने नै भए । विदेशमा वर्षांै काम गर्दा पनि केही फल नपाएर निरास भई फर्किएकाहरू समेत सहभागी । प्रशिक्षणकर्ता कोही ग्लोबल आइएमइ बैंकमा शाखा प्रमुखको जागिर छाडेका त, कोही वर्षौंदेखि बजारप्रमुख ।
मेची पुल पुगेपछि समूहका एक जना नाइकेले अब तीन दिनसम्म फोन गर्न नमिल्ने सुनाए । सँगै गएको दिदीलाई पछ्याउनुको विकल्प थिएन । ती दिदी काठमाडौंकी व्यवसायी हुन् । उनले यो व्यवसायमा काम गर्न थालेको महिना दिन बित्दै छ । जसले उनलाई काँकडभिट्टाका लागि भनेर सिलिगुडीको त्यो प्रशिक्षणमा पठाएका थिए, उनले भने, ‘भाइ मनमा सकारात्मक कुराहरू मात्र सोच्नु है । तीन दिनमा यसले तपाईंको जीवन परिवर्तन गर्छ ।’
त्यो नेटवर्किङ व्यवसायमा के सिकाइन्छ ? नेपालमा प्रशिक्षण नगरेर किन सीमापार ? अन्य नेटवर्किङ व्यवसायभन्दा यो के कुरामा भिन्न छ ? ती विद्यार्थी काठमाडौं फर्किएको भोलिपल्ट मलाई पनि ती दिदीसँग चिया भेट गराइदिए । भेटमा ती साथी, मसहित एक जना थिए । दिदीले शुरुमै भनिन्, ‘तपार्इंहरूलाई कति पैसा कमाउन मन छ ?’ म पनि एकछिन अवाक भएँ । के भनौँ, लाख कि करोड ? नजिकै रहेका साथीले प्वाक्कै भनिदिए, ‘त्यतिका धेरै कसलाई कमाउन रहर नलाग्ला र ? थुप्रै पैसा कमाउन मन छ ।’
यसपछि औपचारिक कुराकानी अघि बढ्यो । दिदीले सुरुमा मोटिभेसनबाट कुराकानी अघि बढाइन् । नोबेल पुरस्कार विजेता जापानी लेखक रोबर्ट कियोसाकीको पुस्तक ‘गरिब बुवा र धनी बुवा’ मा मानिसलाई चार चरणमा विभाजन गरिएको सुनाइन् । पहिलो ‘इ’ अर्थात्, इम्प्लोई (नोकर÷जागिरे), दोस्रो ‘एस’ अर्थात्, सेल्फ–इम्प्लोई (आफ्नै अफिस भएको), तेस्रो ‘बी’ अर्थात्, बिजिनेसम्यान (विनोद चौधरीजस्तो व्यापारी) र चौथो ‘आई’ अर्थात्, इन्भेस्टर (जसले आज यो दुनियाँँ हल्लाइरहेका छन् जस्तैः जुगरबर्ग, ज्याक मा) । दिदीको कुरा सुन्दा कसले नपत्याउला र ! म पनि सजिलै कन्भिस्ड हुन पुगँे । लगभग एक घण्टा बढी दिदीले धारावाहिक रुपमा आफ्नो मन्तव्य राखेपछि नेटवर्किङको कमाइतिर अघि बढिन् । ओहो ! लुकिछिपी लगानी गरेर छिरियो भने त कमाउने काइदा यहाँ पो रहेछ ।
पहिलो ‘डि’ अर्थात डायमण्ड । ओरियन्सको नेटवर्किङमा छिर्ने जुनसुकैको आइडी (सदस्य) यहाँबाटै सुरु हुन्छ । पहिलो आइडी पाउनका लागि एघार हजार लगानी गर्नुपर्छ र त्योभन्दा माथिको सदस्य बन्नुपूर्व एवंरीतले लगानी गरेर आइडी पाउन सकिन्छ । तोकिएको मूल्यअनुसारको आइडी ग्रहण गरेपछि भारतको चेन्नाइस्थित कम्पनीले आफ्नो वितरकबाट सदस्यलाई औषधि उपलब्धि गराउँछ ।
सदस्यले औषधि पाइसकेपछि आफैँ सेवन गर्दा हुन्छ र चाहेको अवस्थामा सुटुक्कै कसैलाई केही मार्जिन राखेर बिक्री गर्दा पनि फाइदा हुन्छ । साथीभाइ, दिदीबहिनी र आफन्तलाई विस्तारै औषधिको बारेमा बुझाउँदै गएपछि उनीहरूलाई पनि यसको ग्राहक बनाउने र यसको कमाइधन्दाबारे बताउने । यसअघि युनिटी, हर्बलजस्ता नेटवर्किङ कम्पनीले सर्वसाधारणको करोडौँ रकम कुम्ल्याएर रोडपति बनाएको दृश्य छँदैछ । त्यो नदोहोरियोस् भनेर सरकारले त्यतिबेलैदेखि नेटवर्किङ प्रथाको अन्त्य त ग¥यो तर अधकल्चो बनाएर । एलोपेथिक दुनियाँँमै रमाउँदै आएको नेपालमा आयुर्वेदिक औषधिको त्यस्तो विस्तार हुन नसक्दा ओरियन्सजस्ता विदेशी कम्पनीले एकछत्र मुलुकबाट करोडौँ रकम गैरकानुनी तवरले लिएर गइरहेका छन् ।
मोटिभेसन कक्षामा अबको युग वेलनेस अर्थात्, सुस्वास्थ्यको र यो युगको अगुवा ओरियन्सबाहेक अरू कुनै कम्पनी नरहेको भन्दै प्रशिक्षण दिइयो । बाहिरी दुनियाँलाई बिर्सेर प्रशिक्षणमा भित्री दुनियाँँबारे सिकाइयो । आफू कसरी बोस बन्ने ? हिजो फुटपाथमा चप्पल पड्काउँदै हिँड्नेले कसरी कार चढ्ने ? यसको समाधान केवल ओरियन्स भनेर घोकाइयो । ‘म पनि हिजो पार्टीको ठूलो नेता थिएँ तर भित्र छिरेपछि थाहा भयो– कतिसम्म हुँदोरहेछ । त्यसैले अहिले पार्टीको काम सबै त्यागेर यता लागेको छु । जसले जे भने पनि दुनियाँ पैसा नै हो’ यसरी नै प्रशिक्षण दिइन्छ । प्रशिक्षणमा विश्वका धनी तथा सफल व्यक्तिको भिडियो देखाइन्छ । जस्तो कि नेपालकै झमककुमारी घिमिरेदेखि अन्तर्राष्ट्रियस्तरकी मलालासम्म ।
मर्न मात्र उक्साइरहन्छ यो मन
​मलाई मात्र किन मायाको पीडा ?
​पत्नीको मोलमोलाइ गर्ने यो पुरुष
​ढोंगले सधैं जिन्दगी धानिन्न
गुरु, हरेक पल नारीतिर खुरुखुरु